မုသားမဲ့ အချစ်ဒဏ် !¡! – Grab Love Story
မုသားမဲ့ အချစ်ဒဏ် !¡!
by phyu June 11, 2021
သားးးးးး သားးးးးးးးး ဘာဖြစ်တာလည်း
ဟင် သား ဘာဖြစ်လို့လည်းးးးးးး ဘွားလေး
အိပ်မက်တွေ မက်ပြီး ထအော်ပြန်ပြီလား သား
ပြန်အိပ်လိုက်အုံးနော် မနက်အလုပ်သွားရအုံးမယ် မဟုတ်လား သား
သား ရေသောက်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်ပါ့မယ် ဘွားလေးလည်း သားကြောင့် အိပ်ရေးပျက်သွားပြီ
ဘွားလေးလည်း အိပ်တော့နော် သားလည်းအိပ်ပြီနော် ဘွားလေး
ဘွားလေး အိပ်ယာထဲပြန်ဝင်သွားတော့မှ ကျနော်လည်း ကြမ်းပြင်ကအိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး ခြင်တောင်ကိုပြန်ချရင်း နဖူးပေါ်လက်တင်ရင်း အသိစိတ်ကလွင့်ပျံ့နေရင်း အတိတ်က ပုံရိပ်တစ်ချို့မျက်စိထဲပြန်မြင်ယောင်လာမိပါတော့တယ်
ဗျာ အမေ ဘာပြောမလို့လည်း သားအိပ်တော့မလို့ မနက်အလုပ်ဆင်းရအုံးမှာ အမေရယ်
အမေ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖျစ်ညစ်လိုက်ရင်း ပြော အမေ
အသက်ပဲ ၃၀ ရှိနေပြီ ကလေးလုပ်မနေနဲ့
ဒီလို သားရေ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ဒေါ်အေးသက် ကိုသိတယ်မလား
သိတယ်လေ ငွေတိုးချေးတဲ့ ဒေါ်အေးသက် လေ ဘဖြစ်လို့လည်း အမေ
သူ့သမီး မြူ နဲ့ လက်ထပ်ပေးချင်လို့တဲ့လေ
သား သဘောကို အမေ တီးခေါက်ကြည့်တာပါ ဘယ်လိုသဘောရလဲ ဟင်
ကျနော် တချက်တွေဝေသွားပြီး ဖြစ်ပါ့မလား အမေရယ် ကောင်မလေး က သားထက် ၄နှစ်လောက်ငယ်တယ် ပြီးတော့ ကောင်မလေးကခပ်ဆိုးဆိုးလေး သားတို့ထက် ပိုက်ဆံလည်းပိုရှိပါတယ် ဖြစ်ပါ့မလား အမေရယ် ဟူးးးး
အိမ်တောင်ကျသွားရင်တော့ ဆိုးတာလေးတွေပျောက်သွားမှာ သားရယ် နော်
မသိတော့ဘူး အမေရယ် အမေ့သဘောပဲဗျာ သားအိပ်ပြီ ဆိုပြီးကျတော် အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပြီးချိန်တွင်
အမေ စီစဉ်လိုက်တော့မယ် သားရေ
အမေ ကြိုက်တာသာလုပ်တော့ အိပ်ပြီ အိပ်ပြီ
အခန်းထဲအမေထွက်သွားမှ ခပ်စွာစွာခပ်ဆိုးဆိုးမြူ ကိုမျက်လုံးထဲမိရင်း အတွေးနဲ့သဘောကျလို့ခပ်ပြုံးပြုံးလေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ
နှစ်ဖက်မိဘတွေစီစဉ်မှုနဲ့အတူ ကျနော်နဲ့မြူ ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးပြီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်
ဘော်ဒါတွေက အရက်တိုက်ဖို့အတင်းခေါ်နေကြလို့ ကျနော် မြူ မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့
လူကို ဘာလာကြည့်နေတာလည်း လိုက်ချင်လည်းလိုက်သွား ဒါပေမဲ့ အန်ဖတ်တော့မကျူံးနိုင်ဘူးနော်
ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ကျနော်အနားက မြူ ထွက်သွားတော့ တစ်အိမ်လုံး ရယ်သံလေးများဖုံလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ဗျာ
ချပါကွာ ငလင်းရာ မင်းကလည်းလက်နှေးနေပါလား
ငါတို့ကောင်ကြီး ငလင်း အတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ရအောင်
ရတယ် သူငယ်ချင်း ပိုက်ဆံငါရှင်းခဲ့လိုက်ပြီ သွားပြီ
အိမ်ကိုရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီထိုးနေပါပြီ ခေါင်းကနည်းနည်းနောက်နေတာနဲ့ လန်းသွားအောင် ရေချိုးလိုက်ပါတော့တယ် စိတ်ထဲနေရထိုင်ရသက်သာသွားပေမဲ့ ခေါင်းကတော့ နည်းနည်းလေးဝေနေပါတယ်
အဝတ်အစားလဲလိုက်ပြီး အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ အိပ်ယာပေါ်ဘေးတစောင်းအိပ်နေသောမြူ ညအိပ်အကျီ င်္ဘောင်းဘီအရှည်လေးနဲ့ အခန်းထဲဝင်လာသော ကျနော်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး အရက်နံကလည်းနံစော်နေတာပဲ ကျမ ခေါင်းပါကိုက်လာပြီ
ဘာလုပ်နေတာလည်း ဒီနေ့တော့ထားလိုက်တော့ မတ်တပ်ရပ်မနေမဲ့ လာ ဘေးမှာလာအိပ်တော့ ပြောပြီး မြူ တစ်ယောက် ကျနော်ကိုကျောပေးအနေအထားအတိုင်း ပြန်အိပ်နေပါတော့တယ်
ရင်ခုန်နေတာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာ ကိုယ်ရင်ခုန်သံကိုယ်ပြန်ကြားမိပြီး သောက်ထားတဲ့အရက်ပါဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာ
ကျနော်လည်း အိပ်ယာပေါ်ထက်လိုက်ပြီး မြူ အနားကပ်ပြီး ဝင်အိပ်လိုက်ပြီး ကျောပေးအိပ်နေသော မြူ လက်မောင်းလေးကိုကိုင်မိပြီး လက်ကပြန်လွှတ်လိုက်မိလိုက်နဲ့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ပြီး ဘယ်ကဘာကို စလို့စရမှန်းမသိအောင် ချွေးပါပျံနေမိပါတော့တယ်
အော် မိဘ ပေးစားလို့ အိမ်တောင်ကျတော့ အခုမှရည်းစားစကားမိန်းမကိုပြောရမလား ရင်နှီးအောင်ပဲအရင်လုပ်ရမလား အတင်းတက်လုပ်ဖို့ကလည်းစိတ်ကမရဲ
ထအော်ရင်လည်း မျက်နှာကဘယ်နားသွားထားရမှလည်း မသိတော့ပါဘူး
ငါ့နှယ့်ကွာ မင်္ဂလာဦးညတော့ ကင်းကျတာနဲ့တူနေပါပြီ
တကယ်ပါဗျာ စကားတောင် ကောင်းကောင်းတစ်ခါမှမပြောဘူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ယူလိုက်ရတဲ့အဖြစ်က တကယ်ကို ငိုရမလိုရယ်ရမလို ခံစားချက်ဖြစ်နေပါပြီဗျာ
ဒီမှာ ကိုလင်းခန့် ကျမကို ထိလိုက်တို့လိုက်လုပ်မနေနဲ့
ကျမကို ထိလိုက်ကိုင်လိုက် လုပ်မနေနဲ့ ကျမအိပ်ရေးပျက်တယ်
လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ် ကျမ ရှင့်မိန်းမဖြစ်နေပြီ နောက်လည်းအတူတူနေရတော့မှာပဲ ရှင့်သဘောပဲ ကျမ မငြင်းဘူး လုပ်ချင်ရင်လုပ် မလုပ်ဘူးဆိုလည်းကျမအိပ်တော့မယ် ကျောပေးထားရင်းပြောနေသော မြူ စကားကြောင့်
မြူ ကို သိပ်ချစ်တယ် သိလား
ဖြစ်ရလေ ကျမ ရှင့်မိန်းမဖြစ်နေပါပြီ ရည်းစားစကားလာပြောနေသေးတယ်
မဟုတ်ဘူးလေ မြူ ချစ်လို့ပြောမိတာပါ ချစ်လား မြူ
ဒီမှာ ကိုလင်းခန့် ချစ်တာမချစ်တာတော့ ကျမ မပြောတတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ မမုန်းဆိုတာတော့ လောလောဆယ် အဖြေပေးနိုင်ပါတယ် ကိုလင်းခန့်
မမုန်းပါနဲ့ သိပ်ချစ်တယ် မြူ ရယ် ဆိုပြီး ကျောပေးအိပ်နေသော မြူ ကို ကျနော် ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီးတော့ မျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီး ကြောင်ကြည့်နေသော မြူ နဖူးလေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်
နဖူးလေးကိုနမ်းပြီးနောက် မြူ ရဲ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကျနော် ဆွဲစုပ်နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
ပြွတ် ပြွတ် အွန်းးးးးးးး အင်းးးးးးးးးးပြွတ် ပြွတ်
ကျနော် လက်တစ်ဖက်က မြူ ရင်သားလေးကို ရှပ်အကျီ င်္ပေါ်ကနေ ကိုင်စုပ်နေရင်း အနမ်းတွေကလည်းပရမ်းပတာဖြစ်နေပါတော့တယ်ဗျာ
အွင်းးးးးအင်းးးးးး ပြွတ် ပြွတ်
မြူ အကျီ င်္ကြယ်သီးလေးတွေတစ်လုံးချင်း ဖြုတ်လိုက်ပြီးး
မြူ အပေါ် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတင်လိုက်ပြီး အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ဘော်လီချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး ဟောင်းလောင်းပွင့်ထွက်လာသော မြူ ရင်သားလေး ကိုကျနော်ကြည့်လိုက်ပြီး လှလိုက်တာမြူ ရယ် သိပ်လှတာပဲကွာ ပြောဆိုပြီး ကျနော် မြူ နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးကို ငုံစုပ်လိုက်ပါတော့တယ်
အိုးးးးးးး ကို အင်းးးးးးးးးးအ အ
ပြွတ် ပလပ် ပြွတ်
တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အရေလေး စိုရွှဲလောက်အောင် ကျနော် စုပ်နေမိပါတော့တယ် ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း မြူ နို့ကိုအုပ်ကိုင်ထားပြီးခပ်ရွရွလေးဆုပ်နယ်ကစားနေမိပါတယ် မြူ ကတော့ ကျနော် ဆံပင်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်းးးးး
အိုးးးးးးး ကို အွန်းးးးးးးး အင်းးးးးးးဟင်းးးးးးးး
အ အ ကို အိုးးးးးးးး ကို ရေ
မြူ အသံလေးက ကျနော်နားထဲသိပ်ကိုအေးမြလွန်းတဲ့သံစဉ်လေးတစ်ခုလိုနားထဲချိုမြိန်မိပါတယ်ဗျာ
အနမ်းလေးတွေက တဖြေးဖြေးအောက်ကိုဆင်းလို့ မြူ ရဲ့ ချက်ကလေး ကို လျှာလေးနဲ့ထိုးလို့အနမ်းခြွေလိုက်မိပါတော့တယ် ပြွတ် ပြွတ်
အွန်းးးးး ဘာတွေလုပ်နေတာလည်း ကိုရယ် ယားလိုက်တာကွာ အွင်းးးးးးးးဟင်းးးးးးးးး
အောက်ဘက်ကို အနမ်းက ဆင်းလိုက်ရင်း ညအိပ်ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပေါင်ကြားမြူ စောက်ဖုတ်ရှိရာဂွဆုံလေးကို နှာခေါင်းလေးမြုပ်ဝင်သွားလောက်တဲ့အထိဖိကပ်နမ်းရှိုက်အဖုတ်လေးနံလေးကိုတဝကြီးဖိနမ်းလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
အိုးးးးးးးးးးးးး အိုးးးးးးးးးးး အ အ အင်းးးး ကိုရယ်
ကျနော် အိပ်ယာပေါ်ထိုင်လိုက်ပြီး မြူ ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်
အိုးးးးး ကို ဆိုပြီး မြူ လက်က စောက်ဖုတ်ကိုဖုံးအုပ်ကာထားပါတယ် ကျနော်သဘောကျလို့ရယ်မိသွားပါတော့တယ် ဟာ ဘာကိုရယ်နေတာလည်း သူများရှက်နေတာကို မျက်နှာပိုးကမသေသေးဘူးနော် မရယ်နဲ့ ရှက်တယ်ဆို
ကဲရှက်မနေပါနဲ့တော့မြူ ရယ်ဆိုပြီး စောက်ဖုတ်ကိုအုပ်ထားသော မြူ လက်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်တစ်ခုတစ်လုံးကို ကျနော်လက်ဖဝါးနဲ့ဖိကပ်ထားရင်းခပ်ဖွဖွလေးပွတ်သပ်ရင်းအရည်လေးစိုစိစိဖြစ်လာတော့ လက်ခလယ်တစ်ချောင်းကို စောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကို မြူ အပေါ်ဖိချလိုက်ရင်း လက်ကလည်း အဖုတ်ထဲကလိကစားရင်း မြူ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ထပ်နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်
ပြွတ် ပြွတ် အွင်းးးးးး ပြွတ် ပြွတ်
စောက်ဖုတ်ထဲနှိုက်ကစားနေတဲ့ လက်ခလယ်လက်ချောင်းလေးမှာလည်း အရည်တွေရွှဲစိုတေပါတော့တယ်
အွင်းးးးးးးးအင်းးးးး ပြွတ် ပြွတ်
မြူ အဖုတ်ကို ငုံစုပ်လိုက်ပါတော့တယ်
အိုးးးးးကို မလုပ်ပါနဲ့ မ လုပ် အင်းးးးးးအိုးးးးးးးး
အားးးးး အမေ ရေ သေပါပြီ အီးးးးးးးးးးးး
အားးးးးး ကို အိုးးးးးးးး ထွက်ကုန်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ
အီးးးးးးးးးးးးအင်းးးးးးးးးအ အ အူးးးးးးဟီးးးဟင်းးးးးးးး
စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ဖိသွင်းထိုးလျှက်ရင်းးးးးးးး စိမ့်စိမ့်
အင်းးးးးး သိပ်ကိုချိုလိုက်တာ မြူ ရယ် သိလား
အင်းးးးးး ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး သိပ်ရှက်တာပဲ
မပြောနဲ့ ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးကွာ ရှက်လာပြီ သိလား
ကျနော် မြူ ကိုယ်ပေါ်ထက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖိချရင်းးးးး
အင်းးးးး အွင်းးးးးးး အင်းးးးးးးးးးးး
ခြေတောက်လေးတောင်ထားရင်းးးး ပေါင်ကားနေသောကြားထဲ ကျနော် ပုဆိုးကို အသာဖြေချလိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကိုပါချွတ်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့လီးကိုကိုင်လိုက်ပြီးးး မြူ စောက်ဖုတ်ကို လီးနဲ့ပွတ်ဆွဲရင်းးး
မြူ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကို ဒစ်မြုံရုံသာ ထည့်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းစုပ်ရင်းး ကျနော် လီးကို မြူ အဖုတ်ထဲ တရစ်ရစ်ခြင်းဖိသွင်းရင်း လီးတဝတ်လောက်ကျပ်သိပ်စွာဝင်သွားရင်း ကျနော်လီးကို တချက်တည်းဆောင့်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
နမ်းနေသောနှုတ်ခမ်းလေးပါ လွှတ်သွားပြီး မျက်လုံးလေးပြူးလို့ မြူ ရဲ့အော်ညီးသံသဲ့သဲ့လေး အခန်းထဲပျံလွင့်သွားပါတော့တယ်
အားးးးးးးကိုရယ် အီးးးးးးးသေပါပြီ ကို ရယ်
ဖတ် ဖတ် အိုးးး မြူ ရယ် ချစ်လိုက်တာ အင်းးးးးသိပ်ကောင်းတာပဲ အားးးး ချစ်ရယ်
စေးကျပ်ကျပ်နဲ့ ကောင်းလိုက်တာ မြူ ရယ် အင်းးးးးး
အားးးး ကို အီးးးးးးးးးဘယ်လိုမှန်းသိတော့ဘူးးးးးအင်း
အိုးးးးးးးသေပါပြီကွာ အီးးးးးးနာလိုက်တာ ဟင်းးးးးးးး
ကျနော်လည်း ပြီးချင်သလိုသလိုဖြစ်လာလို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းခပ်သွက်သွက်ပစ်ပစ်ဆောင့်ရင်းးးးးးးးးးးး
အားးးး အင်းးးးး ချစ်တယ် မြူ အားးးးးချစ်လားးးး မြူ
အားးးးးးးးးး ကို ချစ်တယ် ချစ်တယ် အင်းးးးဟင်းးးး
အားးးးလားးးးးးးကို ရယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် အီးးးးး
အိုးးးးးးးချစ် ကို ပြီးးးးးးပြီးးးးးးးးးတော့ မယ် အ အ
အားးးးး မြူ ရေ ထွက်ပြီ ပြီးးးးးးးးးးးးအင်းးးးးးး
အားးးးးးးးကို ရေ သေပါပြီ အီးးးးးးးချစ်တယ် ချစ်တယ်ကွာ အားးးးးးး ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အိုးးးးးးးးးကိုရယ်
အားးးးးးးအင်းးးးးးးမြူ မြူ အားးးးးးးးးးထွက်ပြီ
မြူ အပေါ်ထပ်ရက်ဖိကျသွားတော့ ပထမဆုံးကျနော်ခါးကိုဖက်ထားရင်းနှစ်ဦးသားအမောဖြေရင်း
မြူ ခုနက ချစ်တယ်လို့ပြောတာ တကယ်လား
အာ လူကြီးဘာတွေလာမေးနေမှန်းမသိဘူး မချစ်ပဲလက်ထပ်ပါ့မလား ဟွန်းးးးးးးးးး
ဒါဆို ကို့ကို ချစ်တာပေါ့နော် မြူ
အမလေး ဖြစ်ရလေ ရှင့်ဟာကျမအထဲရောက်နေတာတောင် ချစ်တာပေါ့ လုပ်နေသေးလား သိပ်မုန်းဖို့ကောင်းတာပဲ လူကြီး
ဆင်းတော့ လေးလှပြီ အသက်ရှုမဝတော့ဘူး ဖယ်
ကျနော် မြူ အပေါ်ကဆင်းပြီး ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီးဖက်ထားလိုက်ရင်း သိပ်ချစ်တာပဲ မြူ ရယ်
ကြယ်ရောင်မစုံတဲ့ညလေးဖြစ်ပေမဲ့ မင်္ဂလာဦးညအခန်းထဲအသစ်စက်စက်ချစ်သူနှစ်ဦးမှာတော့ ချစ်စကားလေးတွေတသွင်သွင်ပြောရင်းအကြိမ်ကြိမ်အချစ်ပင်လယ်ထဲမမောတမ်းလက်ပစ်ကူးခတ်လို့နေပါတော့တယ်
ရက်မှလသို့ပြောင်းလာရင်း သာယာသောအိမ်တောင်ရေးတစ်ခု လေပွေရိုင်းလေးဖြတ်တိုက်လာပါတော့တယ်ဗျာ
ပန်းရံ အလုပ်က နေ့လည့်ထမင်းစားရန် အိမ်သို့ပြန်လာသောအခါ မြူ ကိုမတွေ့ရပဲ အိမ်နောက်ဖေးမှာ အဝတ်လျှော် အဝတ်လှန်းနေသော အမေ့ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် ဒေါသတွေ အလိမ့်လိမ့်ထက်လာမိပါတော့တယ်
တအိမ်လုံးအဝတ်အစားကိုလျှော်နေသောအမေ ကျနော် ရပ်ကြည့်နေတာကို မမြင်တွေ့ခဲ့ပါဘူး
မြူ ထမိန်ပါ လျှော်ပေးနေပြီး ထမိန်ကိုလှမ်းပေးနေသောအမေ့ကိုကြည့်ရင်း ကျနော် ပါးပြင်ကမျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက် ကျဆင်းလာပါတော့တယ်
မြူ မင်းဘာတွေလုပ်နေတာလည်း ယောက္ခမ က ထမိန်ပြန်လျှော်ပေးနေတာ နင်ဝတ်ရက်တယ်ဟာ
ကျနော်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ အမေ
အမေ့ ခုလိုလုပ်နေတာ သား တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး အမေရယ်
အမေ အမေ့ ဘာတွေလုပ်နေတာလည်း ဆိုပြီး
အမေအနားပြေးသွားရင်း မလုပ်ပါနဲ့ အမေရယ်
သားသိပ်မှားတယ် အရမ်းမှားတယ် အမေ
အမေ့ ချွေးမ ထမိန်လျှော်နေတာ သားတကယ်မသိဘူး
သားရင်ထဲ နင့်နေအောင်ခံစားရတယ် အမေရယ်
တော်ပါတော့ တော်ပါတော့ အမေ
သားရယ် မြူ ကို ပြသနာမရှာပါနဲ့နော်
မဟုတ်သေးဘူး အမေ လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး
ယောက္ခမဆိုတာလည်း မိဘပါပဲ အမေ သူနားလည်းရမယ် မိဘတစ်ယောက်လျှော်ပေးတဲ့ထမိန် သူဝတ်ရဲတာ သိပ်အံ့သြတယ် တကယ်တော့ဒါတွေ သူလုပ်ပေးရမဲ့တာဝန်တွေပဲ အမေ ရိုသေလေးစားမှုလေးတော့ ထားသင့်ပါတယ် အမေရယ်
မြူ ဘယ်သွားလည်း အမေ
လမ်းထိပ်က ဒေါ်မြင့်အိမ်ကိုပါ သား
ဘာ ဒေါ်မြင့်အိမ်ဟုတ်လား အမေ
အဲဒီအိမ်က ဖဲဝိုင်း ကြိတ်ဝိုင်းကစားနေတာလေ သူမသိတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်အချိန်က အိမ်ကထွက်သွားတာလည်းအမေ
မြူ မနက်၉နာရီလောက်ကတည်းကပါ သား
ရန်တော့မဖြစ်ကြပါနဲ့ သားရယ် အမေတောင်းပန်ပါတယ်နော်
ဒါဆို မိသားစုအိမ်မှုကိစ္စဘာဆိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်တာပေါ့ အမေ ဟုတ်လား
မပြောနဲ့ အမေ သားနားလည်သွားပါပြီ
သား ထမင်းစားမယ်မလား အမေခူးပေးမယ်နော် လာ
တော်ပါပြီ အမေ သားမစားချင်တော့ဘူး
အလုပ်ထဲပြန်တော့မယ် စိတ်ပျက်တယ် သိပ်စိတ်ကုန်တယ် သွားပြီ အမေ
ဟာ ဒီနေ့ ဘာဖြစ်နေမှန်း မသိဘူး တစ်ချက်မှ ကံမကောင်းသေးပါလား ဒေါ်မြင့် ရယ်
ပိုက်ဆံလည်း ကုန်ပြီ ပြန်တော့မယ် ဒေါ်မြင့် ရေ
ဟာ မြူ ကလည်း ဒီမှာ ဝိုင်းကကောင်းနေပြီလေ
မြူ မှာ ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီလေ ပြန်တော့မယ်
ဆက်ကစားလို့ ရပါသေးတယ် မြူ
ဦးငွေစိုး လိုက်တော့လိုက်ချင်ပါတယ် ဘာနဲ့ဆက်လိုက်ရမှာလည်း ကုန်ပါပြီ လက်ထဲပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူးလေ
ရှိပါသေးတယ် မြူ လည်ပင်းကဆွဲကြိုးအပေါင်းထားမယ်ဆို သုံးသိန်းပေးမယ်
လည်ပင်းကဆွဲကြိုးကို လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ရင်း မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့အမေပေးထားသောဆွဲကြိုးလေး ဖြစ်ပါ့မလား
ကဲ မြူ နောက်တစ်ပွဲစတော့မယ် ဘယ်လိုလည်း
ပေး ဦးငွေစိုး ရော့ ဆွဲကြိုး ကျမ ပြန်ရွေးမှာနော်
အေးပါ ရော့ သုံးသိန်း မြူ
ကဲ လက်ရှောင် နောက်တစ်ပွဲစပြီ ဖဲချပ်များဝေချလိုက်ပြီး ကစားဝိုင်းလေးပြန်အသက်ဝင်လာပါတော့တယ်
မြူ တစ်ယောက်ကတော့ ထမင်းစားဖို့လည်းမသိလောက်အောင် လောင်းကစားနွံ့ထဲနစ်နေရင်း ငွေဇောကပ်နေတော့ပါတယ်
နေလည်းစောင်းတော့ ငွေလည်းကုန် ဝိုင်းလည်းသိမ်းတော့ မြူ တစ်ယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်
ညဘက် မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး လက်စုံစားနေပေမဲ့ ကျမစိတ်ထဲမလုံဘူး ဖြစ်နေပါတော့တယ်
မြူ ထမင်းထပ်ထည့်လေ စားမကောင်းလို့လားသမီး
မြူ ဘာဖြစ်နေတာလည်း မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား နေမကောင်းဘူးလားမေးရင်း မြူ နဖူးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးလေးနဲ့ ဖိကပ်စမ်းလိုက်တော့
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးကိုရယ် ညနေကရေချိုးလိုက်တာနောက်ကျသွားလို့ဖြစ်မယ် ထင်တယ် အဲတာကြောင့်နေရတာတစ်မျိုးလေး ဖြစ်နေလို့ပါ ကို
မြူ လည်ပင်းကဆွဲကြိုးရော ဆွဲကြိုးမရှိတောပါ့လား
အော် ဆွဲကြိုးလား ကို ဆွဲကြိုးက ဒေါ်မြင့် အလှူ သွားစရာရှိလို့ ခဏငှားထားတာပါ မနက်ဖြန်ညနေ ပြန်ပေးမှာပါ ကိုရယ်
ဟုတ်လို့လားမြူ မင်းသတင်းတွေ မွှေးနေတာပဲနော်
အော် သားရယ် သမီးက မနက်ဖြန်ဆွဲကြိုးပြန်ရမှာပဲ သားရယ် စကားမများကျပါနဲ့နော်
မြူ မင်းလုပ်နေတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်တော့နော်
စားလက်စထမင်းပန်းကန်ကို ချထားလိုက်ပြီး လက်ဆေးလိုက်ပြီး ကျနော် အိပ်ခန်းထဲဝင်ကာ အဝတ်ဘီဒိုထဲက သိမ်းထားတဲ့အထည်အောက်ကပိုက်ဆံကိုဆွဲထုက်လိုက်တော့ ကြမ်းပြင်အောက်ပြုတ်ချသွားသော အရာတစ်ခုကို ကျနော်ကိုင်ကြည့်လိုက်ပြီး သန္ဓေထားဆေးကဒ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီး တောက် တစ်ချက်ခေါက်ရင်း
အမေ စိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ ရင်ထဲကစကားကိုမျိုသိပ်လို့ အရက်သောက်ရန် ဘုံဆိုင်လေးသို့ကျနော် ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်
အရက် လေးငါးပက်လောက် သောက်လိုက်ပြီး အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့တော့တယ်ဗျာ
အမေ သားတို့ကို ခုလိုမြင်ရတွေ့ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ သားရယ်
ထားလိုက်ပါအမေ သားရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလည်း သားကိုယ်တိုင်ပဲအသိဆုံးပါအမေရယ်
သား ဘယ်သူကိုမှဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး အမေ
သား ဘုရားခန်းရှေ့မှာပဲ အိပ်တော့မယ် အမေ
သားအခန်းထဲဝင်အိပ်ပါလား သမီးလေးတစ်ယောက်တည်းအိပ်နေရမှာပေါ့ အခန်းထဲသွားအိပ်လိုက်ပါနော် သား
မလိုပါဘူး အမေရာ သားဘာသာတစ်ယောက်တည်းပဲအိပ်ပါရစေ ပြောပြီး ကျနော် ဘုရားခန်းရှေ့မှာပဲအိပ်ချလိုက်ပါတော့တယ်
နံနက်မိုးသောက်အလင်းရောက်လို့ အမေပြင်ထားပေးတဲ့ထမင်းကြော်နဲ့ကြက်ဥကြော်ကို အစာပြေစားသောက်ရင်း
သား အဝတ်ဘီဒိုထဲကစုထားတဲ့ ငွေ နှစ်သိန်းကျော်ပျောက်နေတယ် အမေ ယူသုံးမိသေးလား
အမေ မယူမိဘူး သား
ရပြီ အမေ ဘယ်သူယူသုံးလည်း သားသိနေပြီ
ချွေးနည်းစာလေးတွေပါ အမေ မိသားစုအတွက် သားစုနေတာပါ တနေ့အလှူ လေးလုပ်ချင်လို့ပါ အမေရယ်
ပြောပြီး ယူပါ သားမပြောဘူး အကျိုးရှိအောင်သုံးလိုက်တယ်ဆိုလည်း မပြောတော့ပါဘူး အခုတော့ဗျာ
ကဲ အမေရော့ ဈေးဝယ်ဖို့အမေယူထားလိုက်နော်
သား အလုပ်သွားလိုက်အုံးမယ် အမေ
အော် အမေ သားလေးရယ်
အမေ အမှားတွေပါပဲ သားရယ် အမေ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ အေးချမ်းနေတဲ့ဘဝလေးကို ပူလောင်စရာတွေ အမေပေးမိသလိုဖြစ်သွားပြီ သားရေ
အော် ပြောလေ သမီးလေး မြူ
သမီး ဒေါ်မြင့်တို့အိမ်သွားအုံးမယ်နော် အမေ
အေး သမီး ထမင်းစားတော့ပြန်လာအုံးနော် မြူ
ဟုတ်ကဲ့ပါအမေ ပြောဆိုပြီး အိမ်ထဲကဆင်းလာပြီး
ဒေါ်မြင့် အိမ်ကိုအသွား ဆွဲကြိုးပြန်ရွေးဖို့ ခဏလောက်အကူအညီပြန်တောင်းရန် ဦးငွေစိုး အိမ်ဘက်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်
ဦးငွေစိုး ရှိလား ညီမ
ရှိတယ် အမ ဦးလေး အိမ်ထဲမှာ ဝင်သွားလိုက်နော်
အိမ်ထဲဝင်လိုက်ရင်း ကျမ ဦးငွေစိုးကို အော်ခေါ်မိပါတော့တယ်
လာပြီ လာပြီ ဟေ့
အော် မြူ လာထိုင်ပါအုံး ဘာကိစ္စလည်း
ဒီလိုပါ ဦးငွေစိုး အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ
ကျမ ဆွဲကြိုးလေး တရက်လောက် ခဏပြန်ပေးပါလား မနက်ဖြန် ပြန်ပေးပါ့မယ် ဦးငွေစိုး
ဟာ ဘယ်ရမလည်း မြူ ပိုက်ဆံပြန်မရပဲ ဘယ်ပြန်ပေးလို့ရမလည်း
ကျမ အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါ ဦးငွေစိုး ရယ် ကူညီပေးပါ
ပိုက်ဆံမရပဲ ပေးလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မြူ
လုပ်ပါ ကူညီပါ ကျမ အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါ
ကဲ ဒါဆို နင့်ကိုဆွဲကြိုး ငါပြန်ပေးမယ် ဒါပေမဲ့ ငါ့လိုချင်တာတစ်ခု နင်ဘက်ကပြန်ပေးမယ်ဆို အလကားပြန်ပေးလိုက်မယ်
ဦးငွေစိုး ဘက်က ဘာလိုချင်တာလည်း ပြောပါ
ငါ့ကို တစ်နာရီလောက် အဖော်ပြုနေပေးပါ ဒါဆိုဆွဲကြိုးအပြင် ငွေတစ်သိန်းပါ ငါထပ်ပေးမယ် ဘယ်လိုလည်း
မြူ နင့်သဘောပါ ငါ့ဘက်ကကူညီပေးနိုင်တာဒါပဲရှိတယ် လက်မခံဘူးဆိုလည်း ပြန်တော့လေ ငါ့လည်း ခဏနေ ဒေါ်မြင့်တို့အိမ်ကိုသွားရမယ် ဒီနေ့ဝိုင်းရှိတယ်
ကျမတွေဝေနေမိပါတော့တယ် ငါ့အပြစ်တွေပဲ ဘာလုပ်ရမလည်း ဟူးးးးး
ကောင်းပြီ ဦးငွေစိုး ကျမ လက်ခံတယ်
ဒါဆို ခဏစောင့် မြို့ပြင်တည်းခိုခန်းသွားကြမယ် ပြီးမှ ဒေါ်မြင့်အိမ်သွားကြမယ်ဆိုပြီး အခန်းထဲဦးငွေစိုးဝင်သွားပါတော့တယ်
တူမကြီး ဆိုင်ကိုသေချာရောင်းနော် ဦးလေးအပြင်ခဏသွားလိုက်အုံးမယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ချပါ ဦးလေး
ကျမ ဦးငွေစိုး ဆိုင်ကယ်နောက်မှာလိုက်စီးရင်း မြို့ပြင်ကိုခရီးဆက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ရှင်
တည်းခိုခန်း အခန်းတံခါးပိတ်လိုက်တော့ ကျမ ရင်တွေ
မြူ ဒီမှာ ဆွဲကြိုး နဲ့ ပိုက်ဆံတစ်သိန်း စားပွဲခုံပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီး ကျမရှိရာသို့ ဦးငွေစိုးခြေလှမ်းတိုးလာလို့ ကျမခြေလှမ်းနောက်ကိုဆုပ်ရင်း ကုတင်ကိုတိုက်မိရင်း ကုတင်ပေါ်လှဲကာသွားတော့ ဦးငွေစိုး ကျမအပေါ်ကိုဖိချလိုက်ရင်း သိပ်ချစ်တယ် ကလေးရယ် ဆိုပြီး ကျမကိုအတင်းဖက်နမ်း နှုတ်ခမ်းတွေနမ်းစုပ်ရင်း
အားးးးးး နာတယ် ဖြေးဖြေးညစ်ပါ အားးးးးးကျွတ်ကျွတ်
အားရစွာဆုပ်ချေနယ်ရင်း အနမ်းကလည်း ပါးစပ်ကိုကျရောက်လာတော့
အွင်းးးးးအင်းးးးးအု အအ အွင်းးးးးးးး
လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျမစောက်ဖုတ်ကိုအုပ်ကိုင်ဖျစ်ညစ်ကစားလိုက်တော့ နာကျင်ခံစားမှုကြောင့်စောက်ဖုတ်ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းဖြစ်လို့စောက်ရည်တွေပါ တဆစ်ဆစ်စိမ့်ကျလာပါတော့တယ်
တဆက်တည်းမှာပဲ စကပ်ကိုချွတ်ချခံရပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီပါအချွတ်ခံလိုက်ပြီး ကျမစောက်ဖုတ်နောက်တခါအုပ်ကိုင်ခံရပြီး ပါးစပ်ကိုလည်းခပ်ကြမ်းကြမ်းစုပ်နမ်းတာခံရနေပြီး စောက်ဖုတ်ထဲဝင်လာတဲ့လက်ခလယ်ကလည်းအတွင်းသားကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းဖိပွတ်ရင်း လက်ဖဝါးကို စောက်ဖုတ်ရဲ့အပေါ်အောက်ကိုဖိဖိဆွဲခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပွတ်ခံထိသောကျမ အနမ်းပါလွှတ်ရင်း ဖင်ကပါတကြွကြွဖြစ်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲကစောက်ရည်ကြည်များ အိပ်ယာခင်းပေါ်ပန်းပန်းထွက်ရင်းးးးးးးး
အော်ညီးရင်း အိပ်ယာတဆက်ဆက်တုန်နေသော ကျမ ခြေတောက်ကို ဦးငွေစိုး ကားလိုက်ပြီး ကျမပေါင်ကြားမှာဒူးတောက်ထိုင်ချရင်းးးးး ဦးငွေစိုး ပုဆိုးကိုဖြေချပြီး ကျမစောက်ဖုတ်ကို လီးထိပ်နဲ့ပွတ်ရင်းးးး
ကျမ ခါးကိုကိုင်ထားရင်း လီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲ တဆုံးတချက်တည်းဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင့်
အားးးးးးးးး သေပါပြီ အင်းးးးးးးအောင့်သွားတာပဲ
သေပါပြီ သေပါပြီ အမေရေ အိုးးးးးးအီးးးးးးးးးနာလိုက်တာ အားးးးအ အ အားးးးးးးး
ဦးငွေစိုးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေအောက် ကုတင်ပေါ်နစ်မြုပ်လုမတတ် လိုးလိုက်တာ ရင်ထဲကပါ အောင့်လောက်အောင် ကျမ ကို တကယ်ကိုပက်ပက်စက်စက် လိုးနေပါတော့တယ်ရှင်
ကျမ မှာလည်းအော်ညီးရင်းးးးအသံတွေပျောက်မလုမတတ်ဖြစ်ရင်း စောက်ဖုတ်ကပါ တဆစ်ဆစ်နဲ့ ကျိန်းစပ်နေအောင် ကောင်းနေပါတော့တယ် ရှင်
ဖတ် ဖတ် ဖန်းးးးဖန်းးးးးးး မရပ်မနား အားကုန်သုံးးးဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ကျမမျက်လုံးလေးပါလန်လို့
အားးးးးးးး ပြီးးးးးအီးးးးးးးးးးးထွက်ပြီ အီးးးးးးးးး
အားးးးးးမြူ ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ် အိုးးးးးးးးး
အားးးးအ အားးးးးးးးးးမြူ အားးးးးးးးးး
လီးရေတွေ ကျမ အဖုတ်ထဲ တသောသောပန်းပန်းထည့်လို့ ကျမရင်ထဲနွေးလို့ တဆက်ဆက်တုန်နေရင်း ဦးငွေစိုးခါးကိုဖက်မိရင်းးးး ကျမလည်းးးးပြီးမြှောက်သွားပါတော့တယ်ရှင်
ဟေ့ကောင် ငလင်း ခဏလာအုံး မြန်မြန်
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဆိုပြီး သန်လျှပ် ကိုပစ်ချထားပြီး မဆလာဒယ်ကိုဘေးသို့ရွေ့ပြီး ငြမ်းပေါ်မှအောက်သို့ခုန်ချဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်
လာ ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ ငလင်း
ဆရာဆိုင်ကယ်နောက်ထိုင်လိုက်သွားပြီး မြို့ပြင် ရွှေလရောင် တည်းခိုခန်း မလှမ်းမကမ်း ကားလမ်းဘေးခြုံအကွယ်ထဲဝင်ခိုင်းပြီး
ငလင်း စိတ်ကိုထိန်းနော် ငါပြောတာနားလည်တယ်နော်
ချစ်လိုက်တာ မြူ ရယ် ချစ်လို့မဝဘူးကွာ သိလား
တော်ပါတော့ ဦးငွေစိုးရယ် လေးခါတောင်ရှိနေပြီ
တော်ပါတော့ ကျမ မခံနိုင်တော့ဘူး ပြန်ရအောင်
ကောင်းပါပြီ ဒါပေမဲ့ မြူ ကို ဦးငွေစိုးစွဲနေပြီကွာ သိလား
တော်ပြီ ကျမတို့ ဒေါ်မြင့် အိမ်သွားရအောင် ဝိုင်းစနေလောက်ပြီ
ကောင်းပြီလေ မြူ သွားရအောင်နော်
ကျမနဲ့ ဦးငွေစိုး တည်းခိုခန်းက ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ရှင်
စောင့်ကြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ကျမမြူ တစ်ယောက်လုံးဝမမြင်ခဲ့ပါဘူးရှင်
မသာမ ခွေးမ ဖောက်ပြန်နေကြတာကွာ
ငလင်း ငလင်း စိတ်ကိုထိန်းအုံး
ကျနော် လူသတ်မိတော့မယ် လူသတ်ချင်နေတယ်
ဟေ့ကောင် မင်းသူကို သတ်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလည်း
မင်းသူ့ကိုသတ်လိုက်ရင် မင်းအမေကိုဘယ်သူလုပ်ကျွေးမှာလည်း ရှာဖွေကျွေးမှာလည်း ငလင်း
မကောင်းတဲ့လူကို မကောင်းသလို ထားခဲ့လိုက် မင်းမှာအမေရှိသေးတယ် ရှေ့ဆက်ရမဲ့လမ်းတွေရှိသေးတယ်
မိဘကျေးဇူးကိုဆပ်ခွင့်ရှိသေးတယ် မင်းသူကို့သတ်မယ်အစား လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ ငလင်း
ကျနော် မြေကြီးပေါ်ဒူးတောက်ထိုင်ချရင်း ကျနော်မှားတော့မလို့ဆရာ
ကျနော် နားလည်သွားပါပြီ ကျနော် သူကို လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့မယ် ဆရာ
ပြန်ရအောင် ဆရာ ကျနော် အလုပ်ပဲပြန်လုပ်တော့မယ်
ကျနော်နဲ့ဆရာ မြို့ထဲကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာရင်း လက်ဘက်ဆိုင်မှာ ခဏဝင်နားလိုက်ရင်း အအေးမှာသောက်မိကြပါတော့တယ်
ဆရာ ဘာလို့ အလုပ်ထဲပြန်မမောင်းတာလည်း
ငလင်း မင်းကို ငါစိတ်မချသေးဘူး ဒေါသစိတ်ကိုလျှော့ထားနော်
အကောင်းဆုံးပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ အေးအေးဆေးဆေးဆုံးဖြတ်ပါ ငလင်း
မင်းနောက်မှာ မင်းအမေရှိသေးတာမမေ့နဲ့နော် ငလင်း
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ကျနော် နားလည်ပါပြီ ဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး
အအေးဖိုးကျသင့်ငွေရှင်းလိုက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဆိုဒ်ထဲ အလုပ်ပြန်လုပ်ရင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ထိန်းနေပါတော့တယ်
ကျနော် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ထက်လိုက်ချိန် ဖုန်းမြည်သံကြားလို့ ကိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်
မြူ တို့ဖဲဝိုင်းမှာလူသတ်မှုဖြစ်လို့ မြူ ကိုရဲတွေဖမ်းသွားပြီ
ဗျာ သားပြန်လာပြီ အမေ
သား သား ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း
ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း အမေ သိသလောက်ပြောပြပါအုံးဗျာ
ဒေါ်မြင့် တို့အိမ်မှာ ဖဲဝိုင်းကစားကြရင်းက
လူပျိုကြီး ငွေစိုး က ဖဲခိုးကစားတာ မိသွားလို့ ဒေါ်မြင့်က ရှုံးတဲ့ပိုက်ဆံပြန်တောင်းတာ မပေးလို့ စကားများကြရင်း ဒေါ်မြင့် အနားကရှိနေတဲ့တုတ်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တာ ပွဲချင်းပြီးသေသွားလို့ အားလုံးကိုရဲတွေဖမ်းသွားကြတာတဲ့ သားရေ
မြူ ကို ကယ်ပါအုံး သားရေ
ထားလိုက်ပါတော့အမေ သူ့ကိုဘုရားကဒဏ်ခတ်လိုက်တာပါ အမေ
ရက်မှလပြောင်းလို့ မြူ တစ်ယောက်လည်း လောင်းကစားမှုနဲ့တောင်၈လကျသွားပါတယ်
တောင်ထဲ ၆လလောက်နေရပြီး လျှော့ရက်များနဲ့ ၆လလောက်မှာ အကျဉ်းတောင်ကလွတ်မြောက်လာပါတော့တယ်
ငါ့အမေ မင်းထမိန်ပါလျှော်ပေးနေရတာရော ငါမသိဘူးထင်နေလား
အိမ်မှုကိစ္စဘာတစ်ခုမင်းလုပ်ဖူးလည်း ကုန်ကုန်ပြောမယ် ငါ့စားဖို့ထမင်းတောင် မင်းခူးခပ်ပေးဖူးလို့လားမြူ
ကို မြူ တောင်းပန်ပါတယ် မြူ မှားပါတယ် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ကို
မြူ မှာကိုနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလေ မြူ တို့မိသားစုဘဝလေး သာသာယာယာပြန်နေကြမယ်လေ ကို
ဟားးးးးးးဟားးးးးးး သိပ်ကိုရယ်ရတယ် မြူ
ငါကိုနွားများမှတ်နေလား ငါ့ခေါင်းမှာဂျိုများပေါက်နေသလား မင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါအုံး မြူ
ငါ့နဲ့ပေါင်းနေစဉ် မင်း သန္ဓေကိုယ်ဝန်ထားဆေးတွေခိုးသောက်နေတာ ငါမသိဘူးများမင်းထင်နေလား မြူ
မင်း ရွှေလရောင်တည်းခိုခန်းက ဦးငွေစိုးနဲ့တူတူပြန်ထွက်လာတာ ငါအကုန်မြင်တွေ့ပြီးသား ငါ့ကိုလာလိမ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ မြူ
ကို ရှင်းပြပါရစေ မြူ ရှင်းပြပါရစေ
ပြောလေ မြူ ငါနားတောင်ပေးပါ့မယ် ပြော
ကျမ ဖဲဝိုင်းမှာဖဲရှုံးလို့ ဦးငွေစိုး ဆီမှာ သုံးသိန်းနဲ့ပေါင်ထားခဲ့မိပါတယ်
ကို မေးတော့ ဒေါ်မြင့်ခဏငှားထားတယ်လို့ မြူ ညာပြောမိပါတယ် နောက်နေ့ပြန်ယူလာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ် အဲတာကြောင့် မနက်ပိုင်း ဦးငွေစိုး အိမ်ရောက်ခဲ့တယ် ဆွဲကြိုးကိုခဏပြန်ပေးဖို့ပြောတာမရဘူးလေ
ဒါနဲ့နောက်ဆုံး ဦးငွေစိုးက ဆွဲကြိုးကိုပြန်ပေးမယ် သူ့ဆန္ဒကို တစ်နာရီလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အလဲအလှယ်နဲ့ မြူ လှဲလှယ်မိသွားတာပါ ကို
ဟီးးးးးးးးဟီးးးးးးးးး ဟင့် ဟင့် ဟီးးးးးရွှတ် ရွှတ် ဟီးးးး
အော် မင်းငါ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလေ ဘာဖြစ်လို့ဖွင့်မပြောခဲ့တာလည်း မြူ
ကျမ ကို့ကိုဒုက္ခမပေးချင်လို့ပါ ကို
ဟားးးဟားးးးး ဖြစ်ရလေ မြူ အဲတာကျတော့ မပြောရဲဘူး ဟုတ်လား ဒါနဲ့ပဲ ပိုက်ဆံသုံးသိန်းနဲ့ ငါ့နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်လိုက်တာပေါ့
ငါ့ကို ဒုက္ခမပေးချင်တဲ့မင်းက ငါ့မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာတော့ မင်း ပြန်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ မြူ သိပ်ကိုရယ်စရာကောင်းတာပါပဲ မြူ ဟားးးးးဟားးးးးး
မင်းတို့ ဖောက်ပြန်ပြီးဖဲဝိုင်းသွားတယ် ဖဲဝိုင်းမှာဖဲခိုးကစားလို့ ပြသနာတတ်တယ် ဒေါ်မြင့် က ဦးငွေစိုး ခေါင်းကို တုတ်နဲ့ရိုက်လိုက်လို့ပွဲချင်းပြီး သေလို့
မြူ မင်းကတော့ လောင်းကစားမှုနဲ့တောင်၈လ ကျသွားတယ် လျှော့ရက်နဲ့ မင်းစောစောတောင်ကလွတ်လာတယ် မင်းသေချာစဉ်းစား မြူ မင်းနောက်ဆုံးပြသနာတတ်တဲ့နေ့က သန္ဓေထားဆေး သောက်ဖြစ်ရဲ့လား ဟားးးးးဟားးးးးးး
နင့်လွယ်ထားတာ ငါ့ကလေး ဟားးးးဟားးးးး
ငါရှိတဲ့အရပ်မှာလည်းနင်မနေပါနဲ့ နင်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်း ငါဘယ်တော့မှမနေတော့ဘူး မြူ
နင့်ကိုချစ်လို့ ငါလွမ်းလို့သေသွားပါစေ ငါဆီဘယ်တော့မှပြန်မလာပါနဲ့ မြူ
ငါ့အချစ်ဒဏ် ဒဏ်ရာအတိမ်အနက်ကို အချိန်ကကုစားပေးသွားမှာမြူ ငါနင့်ကိုလွမ်းလည်း နာစရာနဲ့ဖြေပါ့မယ် မြူ
ငါ့စကားတွေက နင့်နားထဲခါးချင်ခါးနေမှာပါ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက် မုသားကင်းလို့ ပူလောင်တဲ့ချစ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး မြူ
ဒီအိမ်လေးကို ရောင်းလိုက်ပါပြီ ငါနဲ့ငါ့အမေ နယ်မြို့လေးတစ်ခုမှာ ငါ့ဘွားလေး အိမ်ကိုပြောင်းသွားတာကြာပါပြီ မြူ
နင့်လုပ်ရပ်အတွက် နင့်လမ်းနင်ဆက်လျှောက်ပါ မြူ
ဒီအိမ်လေးကိုရောင်းလို့ရတဲငွေ သုံးပုံခွဲလို့ နင့်ကို ငါငွေပေးခဲ့ချင်လို့ ဒီနေ့လေးကို ငါပြန်လာစောင့်နေတာပါမြူ
ရော့ မြူ နင့်အတွက် သိန်း၄၀ ယူထားလိုက်ပါ မြူ
နင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့အခါအသုံးပြုလိုက်ပါ မြူ
ငိုမနေပါနဲ့မြူ ဘဝမှာခွဲခွာခြင်းတွေက မသေမချင်းရှိနေမှာပါမြူ
ကံကြောင့်ပဲ ကွဲကွဲ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ကွဲကွဲ
လမ်းခွဲမှာ လမ်းကွဲတာ ဝမ်းနည်းစရာ မဟုတ်ပါဘူး မြူ
အိမ်လေးထဲကအပြင်ကို ခြေလှမ်းရင်း ပါးပြင်ကမျက်တပေါက် မြူ ဘယ်တော့မှမတွေ့မြင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ
ကို ကို ရေ မြေပြင်ပေါ် ဒူးတောက်ငိုနေသော
မြူ ပါးပြင်ကမျက်ရည်စတွေကိုလည်း ကျနော် ဘယ်သောအခါမှထပ်လှည့်ကြည့်ဖြစ်တော့မှာလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ ။ ။
မြူ ရေ ။ ။
လျှာ တိုက် စစ်